Description/subject: 1. AEC သမိုင်း နောက်ခံနှင့် အကျဉ်း 2. အခွင့်အလမ်းနှင့် အားသာချက်များ 3. စိန်ခေါ်မှုနှင့် ကွာဟချက်များ 4. လမ်းပြမြေပုံ-၂ နှင့် အကြံပြုချက်များ... အေအီးစီ ၂၀၁၅ - နိဒါန်း... - အေအီးစီ = အီးယူ ပြီးလျှင် အကြီးမားဆုံး စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာ အားထုတ်ချက် - ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥက္ကဌမှသည် ၂၀၁၅ သို့ - ၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူး ပြောင်းမှု ဒုတိယသက်တန်း - ၂၀၁၅ ရာစုနှစ် ဖွံ့ ဖြိုးမှု ဦးတည်ချက် များပြည့်မှီရေး Millennium Development Goals - လမ်းပြမြေပုံ - ၂ - ဖွံ့ဖြိုးမှုမှသည်ညီညွတ်မှုသို့
Author/creator: U Zaw Oo ဦးဇော်ဦး
Title: A Study on Myanmar's Fiscal Performance/ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရ-သုံးငွေစာရင်းကို လေ့လာခြင်း
Description/subject: နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ... မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန (MICC) နေပြည်တော်၊ ၂ဝ၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၉-၂၁)ရက်... မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရ-သုံးငွေစာရင်းကို လေ့လာခြင်း (A Study on Myanmar’s Fiscal Performance)
Author/creator: U San Thein (ပြုစုတင်ပြသူ – ဦးစံသိန်း)
Title: Banking Development in Myanmar / မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှု
Description/subject: ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန... မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်... မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှု ... နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွမ်းဆောင်မှုအရည်အေသွေးမြင့်မားရန်၊... ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တိုးတက်စေရန်၊... နိုင်ငံတော်၏ဒေသအသီးသီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ... ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဓိကမောင်းနှင်အား... ဘဏ်သမိုင်း ... ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အတွက်ဘဏ်များတည်ထောင်ခြင်း... ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အတွက်ဘဏ်ဥပဒေများပြဌာန်းခြင်း ... ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အတွက်ဘဏ်များတည်ထောင်ခြင်း ... အပ်ငွေလုပ်ငန်း ... ချေးငွေလုပ်ငန်း ... ချေးငွေအမျိုးအစားများ ... ငွေချေးသည့်နည်းလမ်းများ ... အာမခံအမျိုးအစားများ ... ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ... ဘဏ်များကိုကြီးကြပ်ခြင်း ... ဘဏ်များတည်ငြိမ်မရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ... ဘဏ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်း ... ဘဏ်၏ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲခြင်း... နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် များ၏ အပ်ငွေများအား နှိုင်းယှဉ်မှုအခြေအနေ ... နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် များ၏ ချေးငွေများအား နှိုင်းယှဉ်မှုအခြေအနေ ... ၃၁•၃•၂ဝ၁၁ ရက်နေ့ရှိ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်း အမျိုးအစား အလိုက်ချေးငွေ ထုတ်ချေးထားမှု အခြေပြဂရပ် ... ၃၁•၃•၂ဝ၁၁ ရက်နေ့ရှိ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ အာမခံ အမျိုးအစား အလိုက်ချေးငွေ ထုတ်ချေးထားမှု အခြေပြဂရပ် ... နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်း၊ အပ်ငွေနှင့်ချေးငွေ အခြေအနေ ၃၁•၃•၁၉၉၄ မှ ၃၁•၃•၂ဝ၁၁ အထိ... ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ (၃၁•၃•၁၉၉၄) မှ (၃၁•၃•၂ဝ၁၁) ရက်နေ့ထိ ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်း၊ အပ်ငွေနှင့်ချေးငွေ အခြေအနေ ... ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ အရင်း/ အတိုးပေး ဆပ်ရန် ပျက် ကွက်သောချေးငွေများ အချိုး ၃၁•၃•၂ဝဝ၂ မှ၃၁•၃•၂ဝ၁၁ အထိ ... မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်များအသင်း ... ဘဏ်လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင် သူများမွေး ထုတ်ခြင်း... Banking Network ... Payment System Development ... Myanmar Payment Union Card (MPU Debit Card) ... Deposit Insurance ... ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ ...
Author/creator: U Thein Zaw ဦးသိန်းဇော် (ညွှန်ကြားရေးမှူး)
Description/subject: “စီးပွားရေးနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ” ... ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ... လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏အရေးပါမှု... ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သောမူဝါဒအချို့ ... စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒ ... ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နည်းဗျူဟာများ ... မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားနပ်ရိက္ခာ (ဆန်) ဖူလုံမှုနှင့်စားသုံးမှု ... အာရှနိုင်ငံအချို့၏တစ်ဦးကျဆန်စားသုံးမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ... မြန်မာနိုင်ငံ၏စားနပ်ရိက္ခာ (ဆန်) ဖူလုံမှုနှင့်စားသုံးမှု ... တိုင်း/ပြည်နယ်များ၏ စပါးစိုက်ဧရိယာပြောင်းလဲမှု ... ၂ဝဝ၃ခုနှစ်၊ဆန်တင်ပို့မှုမူဝါဒသစ် ... ကွာခြားချက်များသော ဆန်တင်ပို့မှုတိုးတက်နှုန်းထား ... စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းဗျူဟာ ... ဆန်စားသုံးမှုနှင့်ပြည်ပတင်ပို့မှုအချိုးအစား ... စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် SWOT Analysis ... ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းဗျူဟာနှင့်မေခရိုပေါ်လစီ ... မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှနှစ်အလိုက်ချေးငွေများ (ကျပ်သန်းပေါင်း) ... ကျေးလက်ဒေသအသေးစားငွေချေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ...
Author/creator: Daw Theingi Myint ဒေါ်သိင်္ဂီမြင့်
Source/publisher: ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် Yezin Agricultural University- Myanmar
Description/subject: ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်စုံကောင်းမွန်သော စီးပွားရေး ဝန်းကျင် ဖော်ဆောင်ရေး... ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ... လက်ရှိစီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ တွေ့ကြုံနေရသော စိန်ခေါ်မှုများ... လက်ရှိစီးပွားရေး ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်အောင် စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်များ... ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်သော စီးပွားရေး မူဝါဒများအပေါ်အကြံပြုချက်... ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးသည့်အချိန်မှစတင်၍ စီးပွားရေး ကဏ္ဍတိုင်း တွင် ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ် (Market Economic System) ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အချက် များ...၁) ဗဟိုစီးပွားရေးချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း (Decentralization economic control) ၂) ဈေးနှုန်းထိမ်းချုပ်မှုများ ပယ်ဖျက်ခြင်း (Abolishing Price Control) ၃) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများခွင့်ပြုခြင်း (Allowing Foreign Direct Investment) ၄) ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ၅) ဆန်စပါးလုပ်ငန်းအား လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ၆) အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ ပိုး ခြင်း (Improving Infrastructure)... ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများအား ပုဂ္ဂလိက အသွင် ကူးပြောင်းရေး (Privatization) ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ပုဂ္ဂလိက အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းများမှာ အရှိန်ရလာပြီ ဖြစ်ပါ သည်။... ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးတွင် ပုဂ္ဂ လိကကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၉၁ % ပါဝင်ပါသည်။
Author/creator: U Win Aung ဦးဝင်းအောင်
Title: Future Economy and Social Development စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီးပွားရေး မူဝါဒ
Description/subject: စီးပွားရေးနှင့် လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပိုမိုရရှိရေး အတွက် မေခရိုစီးပွားရေး မူဝါဒမြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာ အမျိုးသား အဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ... "စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် စီးပွားရေး မူဝါဒ" စာတမ်းပြုစုသူ- ဦးစိုးသိန်း (ဥက္ကဌ -စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ)... (၁) နိဒါန်း...(၂) နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် စက်မှုကဏ္ဍ...(၃) စက်မှု လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ (၄) နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရန် စီးပွားရေး မူဝါဒ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (၅) အခွန်အကောက်များ အခြေ အနေ (၆) မူဝါဒ ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (၇) နိဂုံး (၈)မေး ခွန်း များ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း... နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တွင် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍသည် လွန်စွာ အရေးပါနေသည့် အတွက်အောက်ပါ ကဏ္ဍများအား အထူးအလေး ထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိ ရပါသည်- (၁) လယ်ယာ၊ သားငါး ထွက်ပစ္စည်း များပြုပြင် ထုတ်လုပ်မှု (Processing Industry) (၂)စက်မှုကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု (Manufacturing Industry) (၃)သတ္တုတွင်းထွက် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု (Mining Industry) (၄) လူသုံးကုန်ပစ္စည်း များ ထုတ်လုပ်မှု (Consumer Goods Industry) (၅)ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း (Construction Industry) (၆)၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း (Services Industries –Logistics & Transport) (၇) သတင်းနှင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်း (IT Industry)... စက်မှုကဏ္ဍဟုဆို ရာတွင် ထုတ်လုပ်မှုကို သာဆောင်ရွက်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ သာမက ထုတ်လုပ်မှုဆောင်ရွက်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ အားဝန်ဆောင် မှုဖြင့် ပံ့ပိုးသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ အားလုံး ပါဝင်လျက် စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိုဆောင်ရွက် လျက်ရှိ ပါသည်။  နိုင်ငံပိုင် ၀န်ကြီးဌာနများ အနေဖြင့် အမှတ်(၁) စက်မှု ၀န်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း ကိုဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး၊  ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန၊ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန၊ အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အထောက်အကူပြု သည့် စွမ်းအင်၊ လျှပ်စစ်၊ လမ်းတံတား ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ Infrastructure ပိုင်း တိုးတက်ရေး အတွက် တာဝန်ယူလျက် စီမံကိန်းများဖြင့် အသီးသီး အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။
Author/creator: U Soe Thein ဦးစိုးသိန်း
Description/subject: ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန... ဆက်သွယ်မှုကဏ္ဍအား ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဓိက အထောက်အကူပြုစေသည်။ (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ) (စာတမ်းပြုစုသူ- ဦးကျော်စိုး- ကျောင်းအုပ်ကြီး ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် စာတိုက်သင်တန်းကျောင်း - မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း) ... ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ... မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ... လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ...
Author/creator: U Kyaw Soe ဦးကျော်စိုး
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင အရေးပါသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု ကဏ္ဍ ... ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်... တရားမ၀င်ကုန်သွယ်ရေးလမ်ကြောင်း... မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍ ... ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သော အချက်များ...
Author/creator: U Set Aung ဦးဆက်အောင် [B.Sc,MBA,M.Sc Banking & Finance(Scotland), M.Sc Investment Management(London), International Consultant Vice Principle & Director, Asia Language & Business Academy(Director), AWRI-Research Institut
Description/subject: စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ... ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ...
Author/creator: Daw Mya Thuza ဒေါ်မြသူဇာ
Description/subject: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ ... ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ... နိုင်ငံတော် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၏ အရေးပါပုံ
... ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်မှုများ
... မြန်မာ အထူး စီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ... ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ အထူးအခွင့်အရေးများ ... အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ... မြေအသုံးချနိုင်မှု... ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက် ထားရာ တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ...
Author/creator: Daw Mya Thu Zar (ဒေါ်မြသူဇာ)
Description/subject: အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် အခွင့်အလမ်း ရပိုင်ခွင့်များ... အလုပ်သမားရေးရာ စာရင်းအင်းများကို လေ့လာခြင်း၊... အလုပ်အကိုင်နှင့်ဆက်စပ် ၍ ဆင်းရဲမှု
လျော့ချခြင်း၊... ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရရှိရေးနှင့် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ကောင်း မွန် ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊...နိုင်ငံအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု
“စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်း၍ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ မွေး ထုတ် ပေး ရန် ဆောင် ရွက်ခြင်း၊...
Author/creator: U Chit Sein ဦးချစ်စိန်
Description/subject: စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (နေပြည်တော်) - ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အခွင့်အလန်းများ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၀)
Description/subject: မြန်မာ့မီးရထား လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် (presentation)
Author/creator: U Kyi Aye ဦးကြည်အေး
Description/subject: အကောင်အထည်ဖော် ဖောက်လုပ်ဆဲရထားလမ်းသစ် စီမံကိန်းများ ၏ ဖောက် လုပ်ရမည့် ခရီးမိုင်၊ဖောက်လုပ်ဖွင့် လှစ်ပြီးခရီးမိုင်၊ ဖောက်လုပ်ဆဲ ခရီးမိုင်စာရင်း... မြန်မာ့မီးရထား လူစီးတွဲ အမျိုးအစားများနှင့် သက်တမ်း အခြေပြ ဇယား... မြန်မာ့မီးရထား ကုန်တွဲ အမျိုးအစား များနှင့် သက်တမ်း အခြေပြ ဇယား... ကွန်ကရိ ဇလီဖား ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံများ...နှစ်အလိုက် ရထား‌ပြေးဆွဲမှုအခြေအနေ...
Description/subject: မြန်မာ့မီးရထား လက်ရှိအ‌ခြေအနေ နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ် သုံးသပ်ချက်... မြန်မာ့မီးရထား၏ အဓိကတာဝန်... မြန်မာ့မီးရထား၏ ရည်မှန်းချက် တာဝန်... မြန်မာ့မီးရထား၏ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ ... ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ဝင်ငွရှောဖွခြေင်း ... ဝင်ငွနှေင့် အသုံးစရိတ်အခြေအနေ ... ရထားလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ် ... ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ ချရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး... စိန်ခေါ်မှုများ ...
Title: Performance for Capital Market Development (မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများ)
Description/subject: စီးပွားရေး စနစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စားသုံးခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း စသည့် စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များရှိရာ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေပိုငွေလျှံ ရှိသူများနှင့် လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးလိုအပ်သူများအကြာ်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးသော ကြားခံ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြပါသည်။ စုဆောင်းမှု ကဏ္ဍမှ ငွေပိုငွေလျှံများကို ရယူစုစည်းပြီး ... ငွေရေးကြေးရေးဈေးကွက် (Financial Market) ငွေရေးကြေးရေး ဈေးကွက်တွင် ငွေကြေးဈေးကွက် (Money Market) နှင့် အရင်းအနှီးဈေးကွက် (Capital Market) ဟူ၍ (၂)ပိုင်းပါဝင်ပါသည်။
Author/creator: U Nay Aye [Deputy Governor-Central bank of Myanmar] ဦးနေအေး
Description/subject: နိုင်ငံလူဦးရေနှင့် လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန်းမှု ... မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ သမိုင်း ... လူဦးရေပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ် ... လူဦးရေ တွင် လုပ်သားအင်အားပါဝင်မှု အချိုးအစား... မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်သားအင်အားကို စစ်တမ်းများအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ခန့်မှန်ခြင်း... အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်...
Author/creator: U Nyi Nyi ဦးညီညီ
Description/subject: တိုင်းပြည်၏ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားနှင့် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ချက်များ (စာတမ်းရှင်- ဒေါ်ဝင်းမြင့်- ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် စီမံကန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန) ... အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန ၏ဆောင်ရွက် ချက်များ... ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ... တမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ... SNA စနစ်များ အဆင့် ဆင့်ပြောင်း လဲလာမှု ... GDP တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းများ ... မြန်မာနိုင်ငံတွင် GDP တွက်ချက်မှု... လက်ရှိတွက်ချက်မှု စနစ်၏ အားနည်းချက်များ... ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ... ကြုံတွေ့ရမည့် အခက်အခဲများ ...
Author/creator: Daw Win Myint ဒေါ်ဝင်းမြင့်
Description/subject: "To reduce poverty in Myanmar, it may be useful to give consideration to the following five issues: First, in order to go forward with poverty reduction, or more generally to go anywhere, we must know where we are at present. Hence, to improve the lot of the poor people in Myanmar we should start by havingaclearer idea of who these poor people are, to find out what is their situation at present, and to listen to them about their needs and desires and what they feel should be done to help reduce their state of poverty. In addition, to getabetter understanding of the situation of the poor people and to improve their well-being we must draw upon the vast experience of many of our compatriots in civil society organizations and NGOs, government officials, business people, scholars, academics and foreign experts and organizations that have donealot of work related to poverty alleviation in the country, especially in rural and border areas and also with respect to meeting special needs of disadvantaged ethnic nationalities and other distressed communities in our society. Second, after finding out where we are at present and where we want to go, the next step will be to think of how to get there..." ....The following paper was presented to the ‘Forum on Poverty’ sponsored by the Burmese government in Naypyitaw on May 20-21, 2011...
Source/publisher: National Workshop on Reforms for Economic Development of Myanmar, Naypyitaw, 19–21 August, 2011 via Mizzima
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွန်အရပ် ရပ်ကောက်ခံရရှိ မှုနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေအနေကို လေ့လာတင်ပြခြင်း (ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန) ... မျက်မှောက်ခေတ် အခွန်အကောက်စနစ် အခြေခံမူများ... ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒ(Fiscal Policy) ... အခွန်မူဝါဒ( Tax Policy) ... မြန်မာနိုင်ငံ၏အခွန်အကောက်ဖွဲ့စည်းပုံ ( Tax Structure) ... အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ... နိုင်ငံတော်၏အခွန်ရငွေနှင့် ဂျီဒီပီအချိုး... အခွန်ရငွေနှင့်ဂျီဒီပီအချိုး နိမ့်ကျရသည့် အကြောင်းအရင်းများ... အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) ၏ အကြံပြုတင်ပြချက်... မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း...
Author/creator: Aung Moe Kyi အောင်မိုးကြည်
Title: Social Welfare: ANNEX Social Welfare System/ မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုဖူလုံရေး စီမံကိန်း နှင့် အနာဂါတ် မျှော်မှန်းချက်
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လူမှု ဖူလုံရေး စီမံကိန်း... မြန်မာနိုင်ငံ လူမှု ဖူလုံရေး စီမံကိန်း၏မျက်မှောက် အခြေအနေ... အခြားနိုင်ငံများ၏ လူမှုဖူလုံရေး အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း... မြန်မာနိုင်ငံ လူမှု ဖူလုံရေး စီမံကိန်း၏ အနာဂါတ် မျှောမှန်းချက်...
Author/creator: U Yu Lwin Aung ဦးယုလွင်အောင်
Description/subject: နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ပြောကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း (၁၉-၈- ၂၀၁၁)(19.08. 2011)
Author/creator: U Thein Sein ဦးသိန်းစိန်
Title: To Implement the Fiscal Policy of the State/ နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေး မူဝါဒများအား အကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်း
Description/subject: ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန... ရသုံးမှန်ခြေ ငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန... နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေး မူဝါဒများအား အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေအားသုံးသပ်တင်ပြခြင်း.... ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃ ရက်...
Author/creator: Dr Linn Aung ဒေါက်တာ လင်းအောင်
Description/subject: မြန်မာ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ချိန်ဆက် မှု... မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှု သမိုင်း အကျဉ်း... ပို့ကုန် တင်ပို့မှုပုံ
ံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲမှု... ပို့ကုန်ဈေး ကွက်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေ... ကုန်ဖလှယ်မှု အချိးပြောင်းလဲမှု အခြေအနေ... ပို့ကုန်သွင်းကုန် ချိန်ဆက်မှု (Balance of Trade) ... လက်ရှိမြန်မာ နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှု အခြေ အနေ (၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ထိ)... အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ... ကုန်သွယ် မှုမြှင့် တင်ရေး အစီအစဉ်များ...
Author/creator: ဒေါက်တာထိန်လင်း Dr. Htein Lynn, [B.Com.(Hons), M.Com., Ph.D, Deputy Director, Directorate of Trade,]
Title: Trade Policy / ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒ
Description/subject: ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒများနှင့် ဖွံ့ဖြိးမှု ... စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ကုန်သွယ်မှု၏ အရေးပါပုံ... မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒများနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သမိုင်း... အာရှနိုင်ငံအချို့၏ ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒများကို လေ့လာခြင်း... မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ကျင့်သုံ
ံးနေသည့် ကုန်သွယ်ရေး မူဝါဒ...
Author/creator: U Maung Aung ဦးမောင်အောင်